Ny antony, ny vokatra, ny risika ary ny hoavin'ny fiakaran'ny hafanana
Social Sciences Fiovan'ny toe-trandro
Inona no miteraka fahasimbana maneran-tany?
Ny mpahay siansa dia nanapa-kevitra fa ny fiaraha-mientan'ny olombelona dia mandray anjara amin'ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny alalan'ny fampidirana tafio-drivotra tafahoatra amin'ny atmosfera. Tondra-drano toy ny gazy karbônika ny atmosfera, toy ny gazy karbônika, ary ny hafanana izay mivoaka ao amin'ny habakabaka.
Greenhouse Gases sy ny fiovan'ny toetr'andro
Na dia misy gaza tambanivohitra marobe aza dia mitranga ary ilaina mba hamoronana ny fiantraikan'ny tambajotra izay mitazona ny Tany ho ampy mba hanohanana ny fiainana, ny fampiasan'ny olombelona ny angovo azo avy amin'ny fôsily no loharanon-drano goavana mahavelona.
Amin'ny famoahana fiara, mampiasa herinaratra avy amin'ireo orinasa mpamokatra angovo, na manasitrana ny tranonay miaraka amin'ny solika na gazy voajanahary , dia mamoaka gazy karbonika sy gazy hafanana hafa ao anaty atmosfera izahay.
Ny fandripahana ala dia loharano iray hafa mampiavaka ny gazy voajanahary, satria ny tany dia mamoaka ny gazy karbonika, ary ny hazo kely dia midika fa tsy ampy ny kojakoja azo avy amin'ny karbôna amin'ny oksizenina.
Ny famokarana simenina dia mitarika fihetsiketsehana ara-tsimia izay tompon'andraikitra amin'ny habetsahan'ny gazy karbonika ao anatin'ny rivotra isan-taona.
Nandritra ny 150 taona nisian'ny indostria, dia nihena 31 isan-jato ny tahan'ny gazy karbonika. Nandritra io fe-potoana io ihany, dia niakatra 151 isan-jato ny haavon'ny metan'ny atmosfera, gazy mitahiry hafanam-be, ny ankamaroan'ny asa amin'ny fambolena, toy ny fiompiana omby sy ny vary. Ny fitomboan'ny metane ao amin'ny lavadrano voajanahary dia mpandray anjara lehibe amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Misy dingana azontsika atao mba hampihenana ny fandefasana entona mandatsa-dranomaso eo amin'ny fiainantsika, hampirisihana ireo programa fampihenana ny fandefasana entona karbonika , lalàna miorina amin'ny famerenana ny ala , ary afaka manohana ireo tetikasa fanatsarana ny fiovaovan'ny toetr'andro .
Afaka Mijery Ny Fiovan'ny Toetrandro ve ny Masoandro?
Raha fehezina, tsia. Misy fahasamihafana eo amin'ny habetsahan'ny angovo azontsika avy amin'ny masoandro noho ny antony toy ny orbitra sy ny tara-masoandro, saingy tsy misy afaka manazava ny fiakaran'ny mari-pana ankehitriny, araka ny IPCC .
Fiantraikany mivantana amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Maro amin'ireo fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro ireo dia mety ho voatery mivantana amin'ny fiovana goavana misy eo amin'ny tontolo iainantsika
Noho ny fifindran'ny entona sy ny hafanana eo amin'ny atmosfera sy ny ranomasina dia misy ny: ny fiovaovan'ny ranomasimbe dia voamarika
Ny faritra mangatsiaka eto an-tany dia tena mora miova amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny tatitra farany momba ny IPCC dia nanazava ny fiantraikan'ny lozam-pifamoivoizana maitso, glacier, ary loharanon-dranomasina
Ny voka-dratsin'ny fiakaran'ny hafanana
Ny fiakaran'ny hafanana mangatsiaka dia manova ny toetr'andro ary manova ny modely amin'ny toetr'andro, izay mety hanova ny fotoana hitrangan'ny fizaran-taona ara-potoana , ary ny hafatr'ireo zava-mitranga be dia be . Miharatsy ny ranomandry , ary mitombo ny haavon'ny ranomasina , ka miteraka tondra-drano. Ny fiovan'ny toetrandro dia mitarika ho amin'ny filaminana ara-tsakafo , ary na ny fiarovam-pirenena aza, ny ahiahiny Ny fanao amin'ny fambolena dia voakasika, anisan'izany ny famokarana siramamy ahitra .
Misy vokany ara-pahasalamana ihany koa amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny ririnina mafana dia ahafahana manitatra ny halaviran'ny karazana lambahoan'olom-bolo sy serfa maromaro, izay mampitombo ny aretin'ny Lyme .
Nahoana no mampidi-doza ny ranomasina misondrotra?
Ny fiovaovan'ny toetrandro ve dia manimba ny sakafo tianao?
Manondraka Gazara Mavitrika kokoa noho ny Olona ve ny Volkano?
Fomba 5 Ny fiovan'ny fikorontanan'ny toetrandro dia mampiova ny tontolon'ny oram-be
Manangàna hazo iray tapitrisa dolara: Vondron'olona maneran-tany hiadiana amin'ny fiakaran'ny hafanana
Inona no fizarana karbaona?
Inona no vokany?
Inona no mitranga amin'ny rivo-doza?
Inona no azon'ny dinôzôra miresaka momba ny fiakaran'ny hafanana?
Miova ve ny toetrandro?
Vehivavy malaza ao Vedic India
Inona no Ataon'ny Injenieran'ny Fitaovam-pako sy ny Fitiavan'izy Ireo?
Plato sy Aristote amin'ny fianakaviana: Taratasy nofantenana
Humphreys Peak: Tendrombohitra avo indrindra ao Arizona
Ny dingana Isochorique
Ny dikan'ny tsato-kazo sy tsipika eny amoron-dalana
Fampiofanana Volleyball: Fitaterana baolina baolina
Famaritana sy ohatra amin'ny teny anglisy tsotra
Biography sy Profile of Theory of a Deadman
3 Hira Fihetsika Fun Fun ho an'ny ankizy
Miala Amin'ny Mosquitoesy ve ny Mpikapa Faka?
Ny lahateny lehibe indrindra nataon'i Abraham Lincoln
Cement ary Concrete
Famaritana diso famaritana (fametrahana fametrahana)
Fanambadiana any Boston: Women Living Together, 19th Century Century Style
Resadresaka tamin'ny A $ AP Rocky
10 Best South African Golfers
Hevi-bavy mahafatifaty izay mahatonga azy ho toy ny anabavy tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
Firy ny Fitsarana Tampony ao Amin'ny Fitsarana Tampony?
Inona no dikan'ireo sarin-tsampy?
Ahoana ny fametrahana ny Daty na ny Time Stamp amin'ny Access Database 2007
Espaniola Shawl Nudibranch (Flabellina iodinea)
Ny olana atoro an'i Bohr Atom Energy
Fiomanana ho an'ny Vondrona Voalamina amin'ny volana iray
Ray Charles 'folo tsara indrindra